म्यूजिक भिडियोमा सुपुष्पा र पल शाहको जोडीलाई दर्शकले मन पराए - City Post Daily
म्यूजिक भिडियोमा सुपुष्पा र पल शाहको जोडीलाई दर्शकले मन पराए
September 20, 2020 मनोरञ्जन
काठमाडौं,४ असोज । म्यूजिक भिडियोमा अभिनेत्री सुपुष्पा भट्ट र अभिनेता पल शाहको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका छन । दर्शकले जोडी मन पराएकोमा सुपुष्पा खुसी भएकी छिन् । फिल्म ‘रणवीर’ बाट सम्भावना बोकेको अभिनेत्रीको रुपमा उदाएकी सुपुष्पा भट्ट लकडाउनभन्दा अगाडि फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को प्रचारमा व्यस्त थिइन् । तर, कोरोनाका कारण फिल्मको प्रदर्शन रोकिएपछि उनी फुर्सदिलो भइन् । लकडाउनको समय घरभित्रै विताएकी उनले ‘रणवीर’ पछि ‘छ माया छपक्कै’ मा अभिनय गरेकी थिइन् । यो फिल्ममा उनको काम रुचाइएको थियो ।
लकडाउनअघि एक फिल्म साइन गरेर बसेकी उनले अहिलेका चल्तीका अभिनेता अनमोल केसीसँग समेत काम गरिसकेकी छन् । फिल्ममा भने होइन । एक कम्पनीको विज्ञापनमा उनले अनमोलसँग स्क्रिन शेयर गरेकी छन् । यसबीच, उनले अभिनेता पल शाहसँग पनि अनस्क्रिन रोमान्स गरेकी छन् । ‘हिँड्दा हिँड्दै’ बोलको म्यूजिक भिडियोमा उनीहरुको जोडी बाँधिएको छ ।
सुप्रिया शर्माको स्वर रहेको गीतमा अम्बिका शर्माको शब्द छ भने अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेका छन् । गीतको भिडियोलाई ‘फाटेको जुत्ता र चपली हाइट ३’ फिल्मका निर्देशक निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् । गीतमा सुपुष्पाको पलप्रति प्रेम आशक्ति व्यक्त गरिएको छ । भिडियोमा उनीहरुको केमेस्ट्री सुहाएको देखिन्छ । दर्शकले पनि यो जोडीलाई मन पराएका छन् ।
नेपाली फिल्मका स्थापित अभिनेतासँग पहिलो पटक म्यूजिक भिडियोमा काम गर्न पाएकोमा सुपुष्पाले खुसी व्यक्त गरेकी छन् । फिल्ममा पनि पलसँग स्क्रिन शेयर गर्ने उनको इच्छा छ । के सुपुष्पाको पलसँग फिल्ममा काम गर्ने इच्छा पूरा होला त ? यसका लागि प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, सुन्दरता र अभिनयका कारण अभिनेत्री सारा सिर्पालीको राम्रो चर्चा हुने गरेको छ । तर, चर्चा भए अनुसार उनको करिअरले भने गति लिन सकेको छैन । अभिनेता निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘रुद्र’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी उनले दोस्रो फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ मा पनि निखिलसँगै जोडी बाँधिन् । दुवै फिल्ममा उनको अभिनय रुचाइयो तर फिल्मले हलमा घुँडा टेक्यो ।
एक समय निखिल उप्रेतीसँग काम गर्ने अभिनेत्रीको भाग्य चम्किन्छ भन्ने भनिथ्यो । तर, साराको हकमा त्यो हुन सकेन । निखिलसँग काम गरेका दुई फिल्मको असफलताले उनीमाथि गिनेचुनेका ब्यानरको नजर पर्न सकेको छैन । ‘निखिल क्याम्प’ बाट बाहिरिएपछि उनले तेस्रो फिल्मको रुपमा ‘सुश्री सम्पत्ति’ मा काम गरिन् । तर, यसले पनि उनलाई हिटको सुख दिन सकेन ।फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गरेकी उनलाई अहिले ‘अनलक्की नायिका’ भन्ने गरिएको छ । यद्यपि, उनले हार खाएकी छैनन् । कुनै एक फिल्मले आफ्नो करिअरलाई गति दिनेमा उनी विश्वस्त छिन् । फिल्म ‘गुञ्जन’ को छायांकन सकेर बसेकी उनी ‘सुश्री सम्पत्ति’ रिलिजताका अनमोल केसीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा थिइन् । तर, उनले यो कुरालाई अफवाह बताउँदै आएकी छन् ।
इन्स्टाग्राममार्फत् उनले आफू कसैको प्रेममा रहेको संकेत भने गरिरहेकी हुन्छिन् । शुक्रवार साँझ इन्स्टामा आफ्नो एक तस्विर शेयर गर्दै उनले ‘के कसैलाई थाहा छ म कति माया गर्छु ?’ भनेर सोधेकी छन् । उनले आफू कसैलाई गोप्य माया गर्ने बताउन खोजेकी छन् । हुनत, कलाकारहरु लुकिछिपी माया गर्न सिपालु मानिन्छन् । यो मामलामा सारा कसरी अपवाद हुन सक्छिन् ?
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्न यूएई पुगे